Ibraahiimi "Suuriya Waxay Kusii Dhacaysaa Haadaantii Soomaaliya oo kale".
Duqeymo 40 qof Shacab ah ay ku dhinteen oo ka dhacday dalka Afghanistan.
Gabar 5 sana jir ah oo lagu kufsaday magaalada Muqdisho.
Sawirro: Al Shabaab oo gacanta ku dhigay diyaarad ku burburtay duleedka saldhigga Balidoogle.
Weeraro khasaara dhaliyay oo ka dhacay Beled Weyne iyo Kudhaa.
Farmaajo oo qiray in Madaxda maamul goboleedyada ay ka adkaadeen.
Toogasho 2 qof ku dhinteen oo ka dhacday dalka Mareykanka.
Monday May 23, 2016 - 14:47:10 in Wararka by Super Admin
Mas'uul horay uga tirsanaa waxa loogu yeero Q.Midoobe ayaa ka dayriyay xaaladda dalka soomaaliya ee dhaca bariga qaaradda Afrika.
Al-akhdar Ibraahiimi ayaa horay usoo noqday Erygayga Q.Midoobe ee Suuriya
Erygaygii hore ee Q.Midoobe u qaabilsanaa arrimaha Suuriya Al-akhdar ibraahiimi ayaa sheegay in soomaaliya ay ku socoto dhabihii wadanka Suuriya.
Isagoo kalimad ka jeediyay dood ka dhacaysay wadanka Al-Jazaa’ir ayuu sheegay in marka loo eego dagaalka sokeeye ee Suuriya iyo dowlad la’aanta daba dheeraatay ee soomaaliya kajirta ay labada dal haadaan kusii dhacayaan.
Wuxuu sheegay in Soomaaliya ay noqotay meel aan looga dhaqmin sharciga caalamiga ah ee reergalbeedku gacantooda ku sameysteen islamarkaana xoogag islaamiyiin ah dagaal ugu jiraan sidii sharciga islaamka ay dalka ugusoo rogi lahaayeen.
"Khatarta weyn ee Suuriya wajahayso ma ahan oo kaliya in la kala qeybiyo ee waa in ay sida soomaaliya oo kale noqoto”ayuu yiri Diblumaasigan dalka Al-Jazaa’ir kasoo jeeda.
Siyaasiga Al-akhdar Ibraahiim ayaa sagaashameeyadii wakiil uga ahaa Q.Midoobe wadamo ay kamid yihiin Afghanistan,Lubanaan iyo Hayti waxaana muuqata in uu walaac ka muujinayo duullaanada isku midka ah ee suuriya iyo soomaaliya lagu qaaday.
Suuriya iyo Soomaaliya ayaa isaga mid ah jamaacaad Jihaadi ah oo ka halgamaya iyo duullaan shisheeye oo dadka iyo dalka lagusoo qaaday.
Qarax ku dhowaad 10 askari ay ku dhinteen oo ka dhacay Soomaaliya.
Saldhigyo ay ciidamada Kenya iyo kuwa Uganda ku leeyihiin Soomaaliya oo la weeraray.
Jihaadiyiinta Soomaaliya iyo Maali oo noqday kuwa ugu awoodda badan qaaradda Afrika [Warbixin].
8 saldhig oo ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin Koonfurta Soomaaliya oo weeraro lagu miray.
Gaari qamri siday oo lagu qabtay bartamaha dalka Soomaaliya.
Dagaal Askar badan lagu dilay oo ka dhacay bartamaha Soomaaliya.
Ciidamo American ah oo qaraxyo lagula beegsaday deegaan dhaca Koonfurta Soomaaliya.
Mareykanka oo sheegay in 5 Bilyan oo Dollar uu ku khasaariyay duullaanka Soomaaliya!
Diyaarad Turkiga laga leeyahay oo cillad ay ku qabsatay Hawada dalka Soomaaliya.
Mareykanka oo hakiyay dhaqaalihii uu dowladda Itoobiya kusiin jiray ladagaallanka 'Argagaxisada'.
Sawirro:Waa sidee xaaladda deegaanka Janaay Cabdalla oo ay isaga baxeen ciidamada Mareykanka?
14/09/2020 - 12:36:05
Sawirro: Al Shabaab oo gacanta ku dhigay diyaarad Basaas oo kusoo dhacday Jubbada Hoose.
13/09/2020 - 10:53:50
Sawirro: Beesha Boqolhore oo Caleema saaratay Suldaan Cusub.
23/08/2020 - 20:47:48
SAWIRRO+VIDEO: Al Shabaab oo si ba'an uxasuuqay Ciidamo Itoobiyaan oo Ku Safrayay Wadada Muqdisho iyo Baydhabo.
19/08/2020 - 13:47:28
Sawirro: Jabiso lagu dilay degmada Saakow Ee gobolka Jubbada dhexe.
13/08/2020 - 08:45:21
Sawirro: Shahaadooyin laguddoonsiiyay Arday dhameystay barashada Quraanka Kariimka.
12/08/2020 - 13:10:35
Sawirro: 100 qof oo ku dhintay Qaraxyadii ka dhacay magaalada Beyruut ee dalka Lubnaan.
05/08/2020 - 10:18:48
Sawirro: Dabaaldegyada Ciidul Adxaa ee wilaayaatka Islaamiga ah oo lasoo gaba gabeeyay.
03/08/2020 - 12:29:24
Sawirro: Mahrajaan Islaami ah oo lagu qabtay Magaalada Ceelbuur.
01/08/2020 - 13:35:52
Sawirro: Sidee looga ciiday magaalada Bu'aale ee Jubbada dhexe.
31/07/2020 - 17:37:10
Copyright © 2009 - 2020 SomaliMemo All Rights Reserved.